Tafakatra telo…, mahalasa saina ny rehetra : nitombo iray indray ny mpiadina ho zandary maty | NewsMada
Tafakatra telo…, mahalasa saina ny rehetra : nitombo iray indray ny mpiadina ho zandary maty
Tao anatin’ny roa andro monja, telo tamin’ireo mpifaninana hidirana ho mpianatra zandary, tany Ambositra no namoy ny ainy. Vao afakomaly indray ny fahatelo no maty. Hoe nihinana zava-pisotro mampatanjaka raha nanao hazakazaka 1.000 m no nahafaty azy. Tranga tsy fahita firy ka mahavelom-panontaniana ny maro.
Tafakatra telo ny isan’ireo mpiadina namoy ny ainy amin’ny fifaninanana hidirana ho isan’ireo 1.200 mianadahy ao anatin’ny andiany faha-73-n’ny mpianatra ho zandary, ao amin’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena ao Ambositra.
Namoy ny ainy afakomaly tamin’ny 7 ora maraina tao amin’ny hopitaliben’Ambositra ny mpifaninana ho zandary iray. Ity farany izay safotra taorian’ny nahavitany ny dingana faharoa, tamin’ny fanatanjahantena namita ny hazakazaka 100 metatra sy 1.000 metatra. Araka ny fanazavana azo, nahavita soa aman-tsara ny dingana rehetra izy ka tamin’ny farany vao safotra teo am-pamaranana izany. Nozahan’ny dokotera ilay tovolahy ity ary naiditra hopitaly avy eo. Voalaza fa nandray ireny karazana zava-pitsotro mampatanjaka ireny izy talohan’ny nanaovany ny fifaninanana ara-panatanjahantena. Tsikaritry ny rehetra fa navitrika izy tamin’ny fampiasam-batana rehetra. Nisy ihany koa ny filazan’ny olona akaiky azy fa efa niomana tsara ity tovolahy ity talohan’ny fifaninanana rehetra. Tsy fantatra anefa izay nahazo azy raha tsy zakan’ny tenany intsony ny fampiasan-kery nataony ka izao nitarika ho amin’ny fahafatesany izao.
Araka ny vaovao avy any Ambositra ihany, nisy tovolahy dimy hafa ihany koa safotra nandritra ity fifaninanana ity, saingy ireto kosa mba tsy namoy ny ainy. Ny fanamafisana avy amin’ny zandary rahateo, misy ny dokotera miaramila sy dokoteran’ny sekolin’ny zandarimaria manara-maso ny fahasalaman’ireo mpiadina, ary mandray azy ireo avy hatrany raha vao misy ny zava-mitranga toy izao.
Aina telo nafoy…
Hatramin’izay nisian’ny fifaninanana nidirana ho zandary na any amin’ny sekoly ambonin’ny miaramila Antsirabe, tsy mbola nisy ny fahafatesana olona telo be izao, ao anatin’ny fanadinana iray. Mety efa tafahoatra loatra ny fampiasam-batana mahazo ireo mpiadina, sa marefo ireo tanora fa tsy voaaraka tsara ny fahasalamany?
Raha tamin’ity tovolahy farany maty ity, voalaza fa nisotro ireny zava-pisotro mampatanjaka ireny izy, ka asa raha misy ifandraisany amin’izany ny mety nahafaty azy tampoka.
Ny azo antoka, efa mihoatra ny tokony ho izy izao fahafatesana eo am-panaovana fifaninanana izao. Tokony hojeren’ny tompon’andraikitra akaiky. Niarahan’ny rehetra nahita fa nisy ny hoe fanamboarana amin’ny fifaninanana mba hialana amin’ny kolikoly,sns, kanefa raha izao mitranga izao, mahalasa saina ny mpanara-baovao ihany. Fa misy inona loatra anivon’ireny fifaninana ireny? OIona tomady ara-batana sy ara-tsaina no raisiny hanao izany, sa izay mety havan’ny sasany, na mahafantatra olona. Nanomana ihany, saingy tsy araka ny tokony ho izy? Heverina fa hisy ny fepetra sy fanazavana mazava aorian’izao fahafatesana tanora telo niatrika fifaninanana fidirana ho zandary izao.